I-Apple Maps yongeza izikhombisi zendlela kumazwe amahlanu ngakumbi | Ndisuka mac
I-Apple Maps yongeza isikhokelo sendlela kumazwe angama-5
Emva kokubona ezinye iivenkile ezivela I-Apple Maps ijikeleza iPortugal, iSpain, iCroatia neSardinia, Inkampani yaseCupertino iyaqhubeka nokusebenza ukuphucula iapp kunye nezikhokelo zayo. Kule meko, imalunga nokongeza imikhombandlela kwindlela ekuyo ngoku kwi-Apple Maps.
Le nto, esele ifumaneka kwamanye amazwe, ibingafumaneki kude kube ngoku e-Australia, Canada, France, Germany nase-United Kingdom, kodwa i-Apple iyiphumezile nje. Ngele ndlela Joyina i-United States ne China ekuphuculeni ukukhangela xa Apple Maps kufuneka isinike umkhombandlela.
Kungenzeka ukuba iivenkile zeApple ziqhubeke nokuzoba iimephu zendlela kwihlabathi liphela kwaye ngelixa oku kusenzeka ngaxeshanye, ulwazi olufanayo luyaqhubeka ngokudibanisa ulwazi ngezothutho lukawonkewonke okanye njengoko kunjalo ngolwazi kwiscreen malunga nomgaqo ekufuneka siyithathile ukuze siqhubeke nendlela yethu. Olunye ulwazi olubalulekileyo kukwazi isantya seendlela ohamba kuzo kwaye okwangoku ziyafumaneka eMelika nase-United Kingdom, ke nangona kuyinyani ukuba basiphucule kakhulu isicelo, kusekho okuninzi sebenza ukwenza.
Oku kunokubonakala kusisidenge kubasebenzisi abaninzi, kodwa akunjalo Ukwazi umda wendlela okanye ulindelo lweendlela ezinqumlayo kubalulekile xa siqhuba kwaye kuyacaca ukuba kufuneka sicace malunga nendlela yokuphuma ngaphambi kokufikelela kuyo ukuze sibe nexesha lokuphendula ngaphandle kokuthintela ukugcwala kwabantu. Yiyo le esivumela ukuba sibandakanye ulwazi lwendlela kwi-Apple Maps, ngoku linda ukuba ifikelele kwamanye amazwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple Maps yongeza isikhokelo sendlela kumazwe angama-5
Ubusela beMac Pro ngobungqina bokulandela umkhondo we-GPS rhoqo?
iMac Pro Airpower, izisa yonke into kunye kwisixhobo esinye